Iskuxirka Darajooyinka Guud ee Kuu Diyaarinaya Shaqada »Hodges U
U dooro Jaamacadda Hodges Barnaamijkaaga Degree Associate
Tallaabada ugu horreysa badanaa waa midda ugu adag in la qaado, haddaba aan maanta bilowno. Ma hubo halka laga bilaabayo? Hoos waxaad kaheleysaa no-frill, sababaha kaliya-xaqiiqooyinka ah ee ah in Hodges noqdo jaamacad kugu habboon.
Kuma qancin shahaadada mustaqbalkaaga?
“Sida arday badan oo Hodges ah, waxaan bilaabay waxbarashadayda sare noloshayda dambe waxaana igu kalifay inaan isku dheelitiro shaqo waqti-buuxa ah, qoys, iyo kulliyad. Taasi waa sababta Jaamacadda Hodges aysan u dhigin oo keliya baahiyaha dadka waaweyn ee shaqeeya bartamaheeda dadaalkeeda si ay uga caawiso waxbarashada sare inay horumarto, laakiin waxay diyaarisay xeelado la xaqiijiyay oo ka caawinaya ardayda inay ku guuleystaan ​​nolosha iyo dugsiga.
Iyada oo jadwalka fasalka bil-bil mar socda, taariikhaha bilowga koorsada billaha ah, oo ay weheliso socodsiinta koorsada la dedejiyey, waxaan u kaceynaa inaan la kulano ardayga soo noqonaya nus barnaamijyo adag oo aan u baahnayn waqti u huridda kulleejooyinka dhaqameed. Intaa waxaa sii dheer, qaabkeena 'Core + 4' wuxuu u oggolaanayaa ardayda dhammeeyay saacadaha deynta 12, iyo kuwa haddii kale u qalma, inay qaataan koorso 4-saac oo dheeri ah oo dheeri ah oo lacag-la'aan ah.
Waxaan aaminsanahay jadwalka oo u shaqeeya sida ugu adag ee aad adigu u shaqeyso, barnaamijyo loo qaabeeyey baahiyahaaga maskaxda lagu hayo, iyo macalimiin diyaar u ah inay ku siiyaan taageero marka aad ugu baahan tahay. Ardaydii hore, macallimiintii hore ee Hodges, iyo madaxii hore ee tacliinta sare, waxaan imid guriga si aan u hormariyo himilada Jaamacadda Hodges ee ah inay taageerto nooc kasta oo arday ah, maxaa yeelay waxaan aaminsanahay adiga iyo mustaqbalkaaga. ”
Dr. John Meyer, Guddoomiyaha Jaamacadda Hodges & Alumni (BS & MBA)